Fifidianana eto Iarivo Hifampitady indray Ravalomanana sy Rajoelina
Serge Zafimahova “700 tapitrisa dolara isan-taona ny trafikana vato sarobidy”
Tsy misy hevitra hivoahana eto afatsy amin’ny seranam-piaramanidina sy ny seranantsambo ofisialy na tsia. Isan’ny noresahan’Atoa Serge Zafimahova ao anatin’ny tatitra sy fanadihadiana “Crise sanitaire coronavirus à
Eliana Bezaza “Ajanony ny famonoana an-kolaka ny vahoaka”
Resy tena resy, tsy vitan'ny hoe resin'ny aretina fa resin'ny tsy fananana. Resin'ny tsy fiasana sy ny tsy fidiram-bola izahay vahoaka, hoy ny sekretera jeneralin’ny antoko politika PSD, Eliana Bezaza, naneho hevitra amin’ny maha olom-pirenena azy.
Krizy ankehitriny “Mafy noho ny tamin’ny 1972, 1991, 2002, 2009”
Potika sy ravarava ny sehatra tsy miankina: nihena ny karama, miato amin’ny asa, voaroaka ny mpiasa,… Mikatona ny sehatr’asa mampidi-bola, raha toa ka tsy tena voakasika ny sehatra ara-panjakana hatreto, kanefa any no tena handefasana ny vola.
Sefo fokontany nesorina Ho tendrena atsy ho atsy ireo mpisolo toerana
Maro ny fitarainana tonga teny amin` ireo ambaratongam-pahefana isa-tsokajiny momba ny tsy fahatomombanana ny fitsinjarana ireo fanampiana avy amin` ny fitondram-panjakana.
Raharaham-pirenena Mitombo isa hatrany ny mpanohitra
Tsy misy idiran’ny resaka K25 na zanak’i Dada araka ny voizina anaty tambazotran-tserasera sy etsy sy eroa intsony ankehitriny ny fanoherana ny zava-misy eto amin’ny firenena.
Rodoben’ny mpanohitra Namoaka ny dosien’ny fitondrana tetezamita
Namoaka ireo teboka lehibe voarakitra ao amin’ny fanadihadiana nataon’ny banky iraisam-pirenena momba ny resaka paradisa fiskaly
Anisan’ny andrasan’ny maro ny fifidianana ben’ny tanàna eto Antananarivo Renivohitra, indrindra fa ho an’ireo antoko lehibe dia ny kandidam-panjakana amin’ny alalan’ny IRD sy ny sokajiana ho mpanohitra dia ny TIM. Re fa hisy ny fanambarana hataon’i Marc Ravalomanana anio maraina. Asa na hisy fifandraisany amin’io na zavatra hafa mihitsy no hambarany.
Ny azo antoka dia tsy maintsy hanana kandida ny TIM na ho izy mivantana na olon-kafa. Tsy mbola fantatra ihany koa izay ho kandidan’ny IRD na efa tamin’ny faran’ny herinandro lasa aza no nilazana fa hivoahany. Tsy maintsy hiasa ny anaran’i Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina. Ireo no heverina fa tena hifampitady eto. Hatreto, zara raha misy kandida 32 nanatitra ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiany ho ben’ny tanàna amin’ireo kaominina miisa 1695 manerana an’i Madagasikara, izany hoe zara raha misy 1,88% hatreto. 2 andro anefa sisa tsy hahataperan’ny fe-potoana satria ny alakamisy 12 septambra amin’ny 5ora hariva ny farafandraisana ny antontan-taratasin’ireo kandida. Efa fombantsika Malagasy ilay miandry farany kanefa mampanahy ny fahavitsiana loatra. Andrasana ny mety ho fihazakazahan’ireo kandida hanatitra ny dosieny ato anatin’ny 2 andro farany any amin’ireo OVEC miisa 114. Maro ny antony mety mahatonga izao. 3 hetsy hatramin’ny 5 tapitrisa ariary araka ny sokajin’ny kaominina ny tolo-kevitra momba ny anto-bola nataon’ny CENI ny volana jona, kanefa novaina ho 6 hetsy hatramin’ny 10 tapitrisa taty amin’ny volana aogositra. Efa nisy anefa ny 21 miliara ariary avy amin’ny kitapombolam-panjakana hanatontosana ny fifidianana, araka ny fifanaovan-tsonia teo amin’ny CENI sy ny minisiteran’ny vola ny 29 aogositra lasa teo. Amin’ny lafiny miabo, mety hitsapana ny fahavononan’ny kandida sy ny tsy fanaovana andrankandrana io satria raha kely ny vola aloa dia maro no hirohotra sao mba lany. Amin’ny lafiny miiba, maro no milaza fa fanilihana tsotr’izao ireo kandida tsy manam-bola be izany, ary mifanohitra amin’ny demokrasia sy ny fifidianana malalaka handraisan’ny rehetra anjara. Ny fifidianana filoha sy ny solombavambahoaka, dia nisy ny kandida nahatsapa fa lasibatry ny hosoka sy hala-bato saingy tsy afa-nanoatra satria didy tsy azo hivalozana ny an’ny HCC. Marihina kosa fa ny Fitsarana misahana ny ady hifanaovan’ny fanjakana no mandray an-tanana ny fifanolanana ara-pifidianana amin’ity. Efa tongotra mby an-dakana anefa ilay amin’ny 27 novambra izao. Mety hahamora ny fampandresena ny kandidam-panjakana sokajiana ho tena mampiasa volabe ny fahakivian’ny mpifaninana ka tombanana hisy kaominina tsy hisy kandida afa tsy tokana.